Manantena ny hahazo tombony amin'ity Korea ity ny Korean Airlines
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Korea Atsimo » Manantena ny hahazo tombony amin'ity Korea ity ny Korean Airlines
Nivily tany LAX ny jet Koreana Koreana voafatotra any Las Vegas noho ny tahotra coronavirus
Tsy ny fivezivezena amin'ny mpandeha rehetra ao anaty kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Tena marina izany ho an'ny zotram-pirenena Koreana Tatsimo.
Ny mpitatitra dia antenaina hanidina tombony amin'ny telovolana voalohany amin'ny 2021
Korean Air Lines Co. dia hanidina amin'ny mainty amin'ny telovolana voalohany amin'ity taona ity.
Ity tranga mahagaga ity dia navotsotra ny alahady teo, satria nanitatra ny orinasany lozisialy ilay orinasa taorian'ny fivarotan'ny virus coronavirus vaovao saika nahantona ny dia mpandeha.
Ity kaompaniam-pitaterana an'habakabaka any Korea Atsimo ity dia andrasana hamoaka tombony 76.6 tapitrisa dolara (68.3 tapitrisa dolara) mandritra ny volana Janoary-martsa.
Ny varotra mandritra izany dia tombanana ho nihena 26 isan-jato nandritra ny fe-potoana ka 1.7 trily tapitrisa won.
Ny Korean Airlines dia nanana fatiantoka 82.3 miliara won nalefa herintaona talohan'izay, araka ny fanadihadiana navoakan'i Yonhap Infomax, sampana ara-bola an'ny Yonhap News Agency.
Ny fahombiazan'ny orinasam-pandraharahana Koreana Air dia manampy amin'ny fahombiazana io.
"Ny habetsaky ny entana nokarakarain'ny Korean Air dia nahatratra taha ambony indrindra tamin'ny volana lasa teo," hoy ny NH Investment & Securities Co. "Ny dia lavitra nanelingelina ny lakandranon'i Suez dia nanjary nitaky filàna bebe kokoa amin'ny serivisy fandefasana rivotra."
Mpikambana ao amin'ny Star Alliance Asiana Airlines Inc., izay miandry ny fampifangaroana miaraka amin'ny mpifaninana Koreana Air lehibe, dia andrasana hamoaka tombony amin'ny telovolana voalohany, raha oharina tamin'ny fahaverezana 70.3 miliara taonan'ny lasa.
Ahoana no hahitana ny fizahantany manerantany: lesona iray avy any Hawaii
Tifitra nirehitra tao anaty hotely Hawaii: Gunman ao amin'ny Kahala Hotel & Resort any Honolulu